Kooxda Barcelona oo wadahadal heshiis kordhin ah la furaneysa Lionel Messi… (Meeqo sano ayay ka saxiixaneysaa?) – Gool FM
(Spain) 22 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa lasoo warinayaa inay isku diyaarineyso inay wadahadal heshiis cusbooneysiin ah la furato ciyaaryahankeeda Lionel Messi.
32 jirkan kaasoo 603 gool u dhaliyay, kaddib 687 kulan uu u saftay kooxda reer Catalonia tartamada oo dhan ayaa ku jira labadii sano ugu dambeeyay heshiiskiisa garoonka Camp Nou.
Sida laga soo xigtay shabakada “ESPN FC” kooxda Barcelona ayaa dooneysa in xiddiga xulka qaranka Argantina oo qandaraaskiisa haatan uu ku egyahay sanada 2021 ay la furato wadahadal heshiis cusbooneysiin ah.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in kooxda xafidaneysa horyaalka Spain ay qorsheeneyso in Lionel Messi ay ka saxiixato heshiis cusub ee 4 sanadood ah, kaasoo xiddiga kasoo jeeda Koonfurta Ameerica ku sii heyn doona garoonka Camp Nou ilaa uu ka gaaro 36 sano.
Weeraryhankan ayaa 51 gool dhaliyay 50 kulan uu u saftay kooxda Barcelona tartamada oo dhan xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, halka sidoo kale uu ku guuleystay 10 horyaalka La Liga ah, tan iyo markii uu ka mid noqday kooxda koowaad ee Barca.
Messi, kaasoo sidoo kale sare u qaaday 4 koob ee UEFA Champions League ah inta uu ku gudi jiray xirfadiisa kubadda cagta ayaan wali qeyb ka noqonin diyaargarowga ay kooxda Barca ugu jirto xili ciyaareedka cusub 2019/2010, kaddib markii uu ka soo qeyb qaatay tartanka Copa America oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka Brazil.
Kooxda Arsenal oo dalab ku kacaya 55 milyan oo lagu daray ciyaaryahan ka gudbisay Wilfried Zaha... (Miyaa laga aqbalay?)